Gareth Bale Aadbaan Ugu Saxsanaa Markaan imanayay Real Madrid | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Gareth Bale Aadbaan Ugu Saxsanaa Markaan imanayay Real Madrid
Ciyaaryahanka garabka uga ciyaara kooxda Real Madrid ee Gareth Bale ayaa daboolka ka qaaday in go’aankii uu ugu biiray kooxda Real Madrid ee ka dhisan boqortooyadda dalka Spain uu ahaa go’aan sax ah, xilli uu kula guulaystay 3 koob tan iyo intii uu kooxda ku soo biiray.
Xiddigan u dhashay xulka Weles ayaa khoryaalka La Liga-ha Spain wuxuu uga yimid dhinaca kooxda England ka dhisan ee Tottenham Hotspur isagoona wali haysta rikoorka taariikhda ciyaaryahanadda xiddiga ugu badan ee lacagtii ugu badnayd lagu iibsaday.
“Waxaan doortay go,aan saxan xagaagii hore kaasi oo ahaa mid noloshaydda u wanaagsan, waxaan ku;a guulaystay kooxdayda 3 koob tan iyo markaan imid, kuwaas oo dhamaantayo faa,iido inoo leh.” ayuu Bale uu u sheegay warsidaha Daily Mail.
“Markii aad u ciyaarayso koox weyn sida Real Madrid oo kale waa koox si aad ah kuu soo jiidanaysa oo aad uga helaysid, dhab ahaantiina aad baan waqtigan la joogo ugu faraxsanahay in aan la sii joogo Real Madrid.”
Si kastaba kooxda Real Madrid ayaa kulankii ugu horeeyay ee uu ku furteen horyaalka La Liga-ha Spain waxay 2-0 ay habeenimadii isniinta ay uga badiyeen kooxda Cordoba.